Somali - Norwegian Teaching
Kusoo dhawaw Karense iskoolkeda internetka ka baxa, NoTe Norwegian Teaching- oo leh koorsooyin looqada norwiijiga ah oo onlyan ku baxa heer walba leh. Kooraskeena Noorwiijiga wuxuu kuu diyaarinayaa imtixaanka noorwiijiga iyo imtixaanka Bergenstest, waxaana ogolaaday UDI iyo Kompetanse Norge. Koorsooyinka internetka ah waxaa dhiga macallimiin aqoon u leh af noorwiijiga oo ah afkooda hooyo, oo in badan ka shaqeyay wax baridda af noorwiijiga siyaabo kala duwan.
Dabacsanaanta koorsada internetka ah
Koorsooyinkayadu internetkay ka baxda sidaa darteedna waa kuwo dabacsan. Baro goorta iyo meesha aad rabto! Koorsooyinku waxay ku habboon yihiin dadka ee axwasha kala dowan, haddii aad mashquul tahay ama ad aad u shaqayso, haddii aad guriga joogtid ama ad waxbaratid.
Waxaan leenahay koorsooyin heerarka A1, A2, B1, B2 iyo C1. Markaa waad dooran kartaa koorsooyin haddii aad tahay biloow ama aad hore u leedahay heer sare oo aad rabto in aad horumar dheeraad ah ku sameysato. Waxaan kugula talineynaa 2-3 saacadood oo shaqo maalin kasta si aad uga faa’iideysato koorsooyinka.
Waxaan sidoo kale leenahay koorsooyin af-noorwiijiga qaybaha caafimaadka iyo xanaanada ah, oo loogu talagalay kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo xanaanada. Intaa waxaa sii dheer, waxaan haynaa tababar wadahadal oo loogu talagalay kuwa doonaya inay ku horumariyaan af-noorwiijiga.
Kuwa raba inay qaataan koorso sayniska bulshada ah 50 saacadood, waxaan tan ku bixinnaa afafka noorwiijiga, Carabiga iyo Ingiriiska.
Macallimiin wanaagsan iyo koorsooyin tayo leh
Iskuulka internetka ayaa la bilaabay sanadkii 2015. Karense waxay khibradeeda macaalinimada luuqada noorwiijiga ah ee ka badan 15 sano u isticmaashay in ay u abuurto koorso noorwiijiga ah oo natiijooyin soo saarta. Iskuulka internetka ayaa leh koox macalimiin noorwiiji ah oo aqoon u leh oo hageysa ardaydayada. Iyada oo la raacayo koorsooyinka internet-ka ah, waad ka faa’idaysan kartaa kheyraadkayaga bilaashka ah, oo ay ku jiraan Karense fiidiyowyada YouTube-ka, podcast-ka, farriimaha codka, koontada Instagram iyo kooxda Facebook.
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kanaalkayaga kala duwan halkan.
Koorsooyin leh hagitaan shaqsiyeed
Koorsooyinka internetka ah ee af-noorwiijiga lagu qaato waxaa ka mid ah layli dhanka akhriska, dhageysiga, iyo qorista ah, iyo duubista codka. Layliyada qoraalka ah ee la soo gudbiyo waxaa aqrinaya, saxa oo qiimeeya macallimiinteena. Halkan waxaa ku yaal talo bixinno ku saabsan sida loo wanaajiyo xitaa marka soo socta. Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan koorso kasta si aad u aragto waxa ku jira ama noo soo dir emayl.
Eeg koorsooyinka halkan.
Waxa kale oo ku jira wadahadal oo hal saac ah oo lala yeesho macallinka bil kasta. Casharadan waxaa loo isticmaali karaa tababbarka wadahadalka, halkaas oo aad ku wanaajin kartid dhawaaqaaga oo aad ugu sii fiicnaan kartid ku hadalka Noorwiijiga, oo aan kaliya ahayn qorista iyo aqrinta. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa saacadda inaad fiiriso naxwaha ee aadan hubin ama aad ugu diyaar garowdo wareysiga shaqada, tusaale ahaan.
Waxa ka dambeeya waxaad heli doontaa dukumeenti wadahadalkii ad wada yeelateen oo ku saabsan waxyaabaha aad soo baratay, ereyada aad u baahan tahay inaad ku celceliso iyo web-seydiyo ilo waxtar leh oo adiga kuu habboon.
Koorsooyinka Ingiriisiga heer kasta
NoTe waxay sidoo kale bixisaa koorsooyin Ingiriis ah heer kasta, iyo sidoo kale Ingiriisiga Ganacsiga. Waxaan haynaa koorsooyin internetka ah laga bilaabo 1-6 bilood, illaa B1. Haddii aad rabto heer sare ka dib markaad dhammayso kooraska, saacad ayaad u ballansan kartaa macallin.
Koorsooyinka Ingiriisiga waxay kuma habboona keliya kuwa baranaaya Ingiriisiga, laakiin sidoo kale kuwa u baahan inay ku sii hagaajiyaan Ingiriisiga imtixaanka TOEFL ama imtixaanka IELTS inay galaan jaamacadda dibedda. Macallinkayaga Ingiriisiga ah wuxuu ka yimid Mareykanka wuxuuna ku noolyahay Norwey.
La kulan Karense
Kanaalka YouTube-ka waxaad ka baran kartaa Karense waxaadna ka dhadhamin kartaa koorsooyinka internetka ah. Hoos ka daawo fiidiyowgan si aad u aragto sida koorsooyinkayaga internetka ay yihiin:
Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno ardayda cusub koorsooyinka. Waan soo dhoweyneynaa qof walba, heerkastoo aad joogtid iyo meesha aad usocto. Hadafkayagu waa inaad adiga ku fiicnaato noorwiijiga.